Umkhiqizi nomhlinzeki | ANGJI
I-XSJ yochungechunge lokugeleza kochungechunge ngokuya ngamazinga okushisa, ingcindezi nokugeleza kokutholwa kwesiginali okuhlukahlukene, ukubonisa, ukulawula, ukuhambisa, ukuxhumana, ukucubungula ukucubungula, uhlelo lokulawula ukutholwa kwedijithali. Okwegesi, umhwamuko, ithothali yamanzi, ukulinganisa nokulawula.
Inombolo yemodeli: XSJ
Igama lomkhiqizo: ANGJI
Indawo Yomsuka: Shanghai, China
Ukunikezwa kwamandla: 24VDC noma 85-220VAC
Isignali wokufaka: Pulse 、 4-20mA 、 0-5V
Umsebenzi: Okwegesi, umhwamuko, ithothali yamanzi, ukukala nokulawula.
Ukunemba: ± 0.2% FS
okukhiphayo: RS485 interface 、 4-20mA, Alarm
Usebenzisa imvelo: - 30 ° C + 70 ° C （ngeLCD）
Usayizi: 48mm * 48mm / 96mm * 96mm / 160mm * 80mm
Umsebenzi wangokwezifiso: ngokuya ngosayizi wegobolondo lomsebenzisi nezidingo zepharamitha, ukwakhiwa kwamasekethe ahlanganisiwe.
Izinhlamvu ze-OLED English ziboniswa; Imodi yokufaka yesiginali: ukufaka isignali ye-pulse (yamukela kuphela isignali ye-pulse); ngendlela eyodwa ye-alamu; Ukunikezwa kwamandla ka-220VAC / 12 ~ 24VDC
Izinhlamvu ze-OLED English ziboniswa; Imodi yokufaka yesiginali: ukufaka isignali ye-pulse (yamukela kuphela isignali ye-pulse); ngendlela eyodwa ye-alamu; ngokuxhumana kwe-RS485; Ukunikezwa kwamandla ka-220VAC / 12 ~ 24VDC
Izinhlamvu ze-OLED English ziboniswa; ngokushisa kanye nokucindezelwa kwengcindezi; ngendlela eyodwa ye-alamu; Imodi yokufaka yesiginali iyakhethwa: ishayela / i-current / voltage (ukukhetha okukodwa okukodwa); Ukunikezwa kwamandla ka-220VAC / 12 ~ 24VDC; ngomsebenzi wokuthekelisa idatha we-USB
Izinhlamvu ze-OLED English ziboniswa; ngokushisa kanye nokucindezelwa kwengcindezi; ngendlela eyodwa ye-alamu; Imodi yokufaka yesiginali iyakhethwa: ishayela / yamanje / i-voltage (ukukhetha okukodwa okukodwa); Ukunikezwa kwamandla ka-220VAC / 12 ~ 24VDC; ngokukhishwa kwamanje kwe-4-20mA
Izinhlamvu ze-OLED English ziboniswa; ngokushisa kanye nokucindezelwa kwengcindezi; ngezindlela ezimbili ze-alamu; Imodi yokufaka yesiginali iyakhethwa: ishayela / i-current / i-voltage (ukukhetha okukodwa okukodwa); Ukunikezwa kwamandla ka-220VAC / 12 ~ 24VDC; ngokukhishwa kwamanje kwe-4-20mA; ngomsebenzi wokuthekelisa idatha we-USB; ngokuxhumana kwe-RS485
Ukuboniswa kwezinhlamvu zesiNgisi, kunesinxephezelo sokushisa nengcindezi, ngayo yonke indlela yesiteshi se-alamu, ugesi ongu-220VAC / ugesi ongu-12 ~ 24VDC
Ukuboniswa kwezinhlamvu zesiNgisi, kunesinxephezelo sokushisa nengcindezi, ngesiteshi esisodwa se-alamu, ngokuxhumana okungafani kwe-RS485, ukunikezwa kwamandla ka-220VAC / 12 ~ 24VDC
Ukuboniswa kwezinhlamvu zesiNgisi, kunesinxephezelo sokushisa nengcindezi, ngayo yonke indlela ye-alamu, ene-U disk interface, ugesi ongu-220VAC / 12 ~ 24VDC
Ukuboniswa kwezinhlamvu zesiNgisi, kunesinxephezelo sokushisa nengcindezi, ngayo yonke indlela ye-alamu, ngayo yonke indlela 4 ~ 20mA okukhiphayo kwamanje, ugesi ongu-220VAC / 12 ~ 24VDC
Ukuboniswa kwezinhlamvu zesiNgisi, kunesinxephezelo sokushisa nengcindezi, ngesiteshi esisodwa se-alamu, ngokuxhumana okungafani kwe-RS485, ngayo yonke indlela 4 ~ 20mA okukhiphayo kwamanje, ugesi ongu-220VAC / 12 ~ 24VDC
Langaphambilini I-Totalizer Yokushisa Epholile
Olandelayo: Ikhawunta yokusebenzisa i-Fuel
Ukugeleza Kwekhompyutha Okugelezayo
Insimbi yenkomba yokugeleza kwenamba
Iphethiloli yokusetshenziswa kukaphethiloli
I-Totalizer Yokushisa Epholile